Football Khabar » रियल मड्रिडद्वारा नेइमार भित्र्याउन यस्तो ‘प्याकेज अफर’ !
रियल मड्रिडद्वारा नेइमार भित्र्याउन यस्तो ‘प्याकेज अफर’ !
फ्रेन्च क्लब पिएसजीका ब्राजिलियन स्टार नेइमार अनुबन्ध गर्न अहिले स्पेनका दुई क्लब बार्सिलोना र रियल मड्रिड दौडमा छन् । बार्सिलोना आफ्ना केही खेलाडीसहित केही रकम दिएर नेइमार फर्काउने दौडमा छ । यता, रियल पनि उस्तै अफर दिएर पिएसजीसँग विश्वकै सर्वाधिक महँगा खेलाडी भित्र्याउन फ्रेस डिल गर्ने दाउमा छ ।
स्पेनिस मिडिया रिपोर्टअनुसार रियलले २७ वर्षीय नेइमार भित्र्याउन पिएसजीलाई प्याकेजमा अफर गरेको छ । उसले आफ्ना खेलकुद बोर्डका अधिकारीमार्फत् पिएसजीलाई १३० मिलियन युरोसहित आफ्ना खेलाडी ग्यारेथ बेल वा हामेस रोड्रिग्वेजमध्ये एकजना दिने अफर गरेको छ ।
वेल्स स्टार बेल अहिले रियलमा आफ्नो स्थानका लागि ठूलो संघर्ष गरिरहेका छन् भने रोड्रिग्वेज जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखबाट लोन अवधि पूरा गरेर रियल नै फर्किएका छन् । आगामी सिजनमा जिनेदिन जिदानको नेतृत्वमा यी २ जनै खेलाडी उनेको योजनामा नपर्ने पक्काजस्तै छ ।
यही अवस्था टेकेर रियलले नेइमारका लागि १३० मिलियन युरोसहित एक खेलाडी दिने भएको छ । रियलको यो अफर मूल्यांकन गर्दा न्यूनतम् बजेट साइज २३० मिलियनसम्म हुन्छ । यतिबेला बेल वा रोड्रिग्वेजको बिक्री मूल्य बढीमा १०० मिलियनसम्म हुनसक्छ । यी दुवै खेलाडीलाई रियलले विश्वकीर्तिमानी मूल्यमा अनुबन्ध गरेको थियो ।
यता, बार्सिलोनाले पनि नेइमारका लागि १०० मिलियन युरोसहित ३ जना खेलाडी दिने गरी तयारी गरेको चर्चा सरुवा बजारमा छ ।
नेइमारले नयाँ सिजनअघि नै पिएसजी छाड्ने पक्काजस्तै भए पनि उनी बार्सिलोना वा रियल जान सक्छन् भन्ने ठोस दृश्य छैन । बार्सिलाना कप्तान लिओनल मेस्सीलगायत खेलाडीको चाहनामा नेइमार फर्काउन लागिपरहेको बताइन्छ ।
प्रकाशित मिति ५ असार २०७६, बिहीबार ०९:०२